TAFA-PIFIDIANANA : Tabera Randriamanantsoa sy Ravalomanana Marc -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Tabera Randriamanantsoa sy Ravalomanana Marc
08/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny vahoaka no masi-mandidy
Miainga eny ifotony ny fampandrosoana atao rehetra. Izay ihany no lalana ahafahana manala ny vahoaka malagasy anatin’izao fahantrana lalina izao, raha ny nambaran’i Tabera Randriamanantsoa, kandidà atolotry ny antoko Kintana, ary laharana fahatelo ao anatin’ny bileta tokana. Tokony hiainga avy amin’ny vahoaka eny ifotony avokoa ireo tetikasa fampandrosoana rehetra, toa ny fahasalamana sy fampidirana rano fisotro madio ary ny famatsiana herinaratra, izany hoe ny sehatra sosialy rehetra izay fositra nampahantra ny vahoaka malagasy tamin’ireo fitondrana nifandimby teto amin’ny firenena.
Hatramin’izay tokoa mantsy, dia niainga tany amin’ireo mpitondra hatrany ny fanapahan-kevitra rehetra noheverina fa nitondra fampandrosoana. Iaraha-miaina hatramin’ny androany anefa ny vokatr’izany, fa tsy misy miafina amin’ny rehetra intsony. Ireo lalàm-panorenana niainan’ny firenena hatramin’izay no tena fositra nahatonga izany raha ny fanazavan-kevitr’ity Kandidà laharana faha-3 ity hatrany. Lalàm-panorenana izay tsy nanome lanja ny fanapahan-kevitry ny teny ifotony mihitsy, fa nanome vahana ireo mpitondra nifandimby ihany koa. Tsy maintsy hisy araka izany ny fanovana ity lalàm-panorenana ity, hifanaraka amin’ny fandaharan’asa sy vinan’ity Kandidan’ny antoko Kintana ity raha ny nambarany.
Anisan’ny zava-baovao entin’i Tabera Randriamanantsoa ao anatin’ny vinany ihany koa ny hametrahana ilay rafitra antsoina hoe “Federalista Malagasy”. Ity rafitra ity dia tsy mitovy amin’ny an’ireo mpanao politika hafa, efa nilaza ny hanangana izany teto amin’ny firenena raha ny fanazavany. Ny atao hoe Federalista mantsy aminy dia fanomezana vahana ny eny anivon’ny Fokontany, ahafahan’izy ireny mihevitra izay hampandroso ny eny ifotony eny, izany hoe ankoatra ireo fanomezana fizakan-tenana’ny faritany, dia omena sehatra ahafahany miaina sy mampiasa izay harena misy eo aminy ihany koa ireo fokontany rehetra manerana an’i Madagasikara. Azo antoka amin’izay fa tena handroso ny firenena.
Santionany amin’ireo fandaharan’asa fampandrosoana entin’ity Kandidà ity mandresy lahatra ireo mpifidy ihany ireo voalaza ireo. Ao anatin’izao fampielezan-kevitra izao, dia hisy ny fanazavana amin’ny antsipirihiny ireo fandaharan’asa rehetra, sy ny soa azo amin’izany. Tetsy amin’ny boriborintany fahenina no nanokatra izany tamin’ny fomba ôfisialy i Tabera Randriamanatsoa omaly folakandro. Nisy ny fanampiany ireo tanora mpanao fanatanjahantena tao anatin’io boriborintany io, izay natao teny Ambohimanarina nandritra izany.
Fampandrosoana amin’ ny alalan’ny MAP2
Nitafa tamin’ ireo mponin’Antananarivo tetsy amin’ ny Magro behoririka ny kandidà Marc Ravalomanana omaly, niompana tamin’ ny programan’asany sy ny vina entiny hampandrosoana ny firenena ny fihaonana. Ankoatra ny fananganany ny orinasa Tiko Sa, dia isan’ny nahalalana azy ihany koa ny tetikasa MAP, na ny Madagasikara amperin’asa, na “Madagascar action plan”. Anatin’ity fampielezan-kevitra ity kosa, dia notazonin-dRavalomanana ihany ny MAP, saingy hitondra ny laharana faharoa izy amin’ ity “mandat” an’i Ravalomanana Marc ity, izany hoe MAP2. Raha ny fantatra anatin’ ity MAP2 ity, dia teboka folo no misongadina. Tafiditra anatin’izany ny fanenjehana ny ODD, na ny “Objectif de development durable’’, izay vina fantatra fa tratrarin’i Ravalomanana Marc hatrany. Raha ny sombin’ ny fanazavana nentin’ ingahy Ravalomanana, dia ny fampandrosoana ho an’ ny rehetra no tanjony. Izany hoe tafiditra anatin’izany ny fianarana, sy ny fahasalamana ho an’ ny rehetra. Nambarany tamin’ny fihaonany tamin’ ireo mponin’Antananarivo teny amin’ ny Magro aza, fa dia haverina ny fizarana “tablier” sy ny fitaovam-pianarana tahaka ny teo aloha, io ilay hoe “kits scolaires”
Tsihahivina tokoa ny zava-nitranga tany aloha, fa isan’ny nahafantarana an-dRavalomanana ankoatra ny fizarana “kits scolaires” ny fananganana ny CSB I sy II. Tsiahivina ny fananganana ny Map, fa niarahan’ ny rehetra namolavola izy io, izay nakana ny hevitr’ireo mponina manerana ireo faritra 22, izay nampahafantarina ny volana Novambra 2006. Miisa 8 ny fanamby hotratrarina tao anatin’ny Map voalohany, dia teo ny governemanta tompon’andraikitra, fotodrafitrasa mifanaraka amin’ny filana, fanovana ny rafi-pampianarana, fampandrosoana ny eny ambanivohitra sy ny fametrahana tontolo maitso, fahasalamana, fandrindram-piterahana ary ny ady amin’ ny VIH SIDA, taham-piakaran’ny toe-karena ambony, tontolo iainana sy firaisankinam-pirenena. Raha tsiahivina dia maro tamin’ ireo teboka nipetraka tanatin’ny “OMD” tamin’ izany fotoana no tanteraka, tamin’ ny alalan’ny fametrahana ny MAP.
Raha ny tsilian-tsofina heno, dia ahitana teboka miisa folo anatin’ity MAP 2 ity. Izy ireo dia fantatra miompana ihany koa anatin’ny fahatrarana ny tanjon’ny ODD, izay ahafahana mampandroso haingana dia haingana. Tonga maro ireo mponin’Antananarivo omaly, namaly ny antson’ny kandidà Ravalomanana. Ity farany izay efa fantatra fa manana ny fahaiza-manao eo amin’izay lafin’y fampandrosoana izay.